थप २६ नगर बसलाई रुट परमिट
पोखरा, १ भदौ । केही महिनादेखि नगर क्षेत्रमा बससेवा सञ्चालन गर्दै आएको बिन्ध्यवासिनी यातायात बस व्यवसायी समितिले थप २६ वटा बस सञ्चालन गर्न रुट परमिट पाएको छ । पुरानो पोखरा बस व्यवसायी समितिको विरोधका बाबजुद पोखराको नगर क्षेत्रमा तीनवटा नगर बस सञ्चालन गर्दै आएको बिन्ध्यवासिनीले थप २६ वटा बस सञ्चालन गर्ने परमिट पाएपछि अब समितिबाट सञ्चालन गर्ने बसको सङ्ख्या २९ पुगेको समितिका अध्यक्ष सोमबहादुर गुरुङले… विस्तृत समाचार
काठमाडौं, १ भदौ । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने गाडीको तत्काल रुट परमिट र चालकको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेकै कारण काभ्रेमा सोमबार बस दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकाल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अब सवारी कानुन उल्लंघन गर्ने सबै सार्वजनिक गाडी, तिनका मालिक र चालकलाई कडा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभाग तथा… विस्तृत समाचार
चन्दा माग्नकै लागि विद्यालय बन्द
काठमाडौं, ३२ साउन । अघिल्लो साँझ होमवर्क गरीवरि स्कुल जान तम्तयार विद्यार्थीहरू सोमबार पढ्न जान पाएनन् । अधिकांश अभिभावकको मोबाइलमा स्कुलबाट बिहानै म्यासेज आएको थियो– शैक्षिक हडतालका कारण आज स्कुल बन्द रहनेछ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले देशभरका शैक्षिक संस्था ठप्प पार्दा ७५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी स्कुल जान वञ्चित भए । आफू किन स्कुल जान पाइनँ भन्ने कुरा न विद्यार्थीले पत्तो पाए… विस्तृत समाचार
नत्र म पनि मर्थें होला
राजकुमार तामाङ (काभ्रे बस दुर्घटनाका घाइते) म ठिमीबाट बिर्तादेउरालीका लागि ७ः३० बजे बस चढेको थिएँ । बस निकै प्याक थियो । सिट खाली नभएका कारण म छतमा बसेको थिएँ । म ड्राइभरभन्दा ठीक माथि थिएँ । क्यूको पहिलो गाडी भएको हुनाले धेरै यात्रु थिए । बाटो अप्ठेरो भए पनि १ः३० बजे घटना भएको ठाउँमा पुगिएको थियो । हिलो भएका कारण ड्राइभरले लिक च्यापेर भित्तामा लगेका… विस्तृत समाचार
उनीहरुलाई काम गर्न नदिनू : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, ३१ साउन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहयोगीलाई स्वास्थ्यसचिव सेनेन्द्र उप्रेतीलाई फोन लगाउन भने । निर्देशनलगत्तै सहयोगीले उप्रेतीसँग प्रचण्डको फोन सम्पर्क गराए । ‘नक्कली डाक्टर काममा फर्किएको भन्ने सूचना के हो ? प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासामा उप्रेतीले आफूलाई केही चिकित्सक काममा फर्किएको भन्ने सूचना आएको बताए र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निलम्बन हुनुको कारण देखाएको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । लगत्तै प्रचण्डले फोनबाटै निर्देशन दिए, ‘उनीहरुलाई काम… विस्तृत समाचार
काठमाडौं, ३० साउन । संविधानले थप गरेको क्षेत्राधिकारबमोजिम संघीय सरकारी सेवासहित संगठित संस्थाहरुको परीक्षा सञ्चालनको कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारले लोक सेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार स्म्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ। नयाँ संविधानले आयोगलाई सुरक्षा निकाय, संस्थान सेवा तथा अन्य सरकारी स्वामित्वका संगठित संस्थाको कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी परीक्षा सञ्चालनको दायित्व थप गरेको छ । थपिएको भूमिकाअनुसार कानुन… विस्तृत समाचार
छात्रावासमा ‘भूत’ले सतायो !
काठमाडौं, ३० साउन । सबैले मिलनसार दिदीका रुपमा चिन्ने हुम्ला जिल्लाको एक मात्रै महिला फिडर छात्रावासको सिद्धा ऐडीको व्यवहार एक सातादेखि निकै फरक छ । अरुको काममा सहयोग गर्ने छात्रावासका साना बहिनी र आफ्नै सहपाठीलाई पढाइ तथा अन्य काममा समेत सुझव दिने ऐडीको बोली निकै परिवर्तन भएको छ । मिजासिला शव्द र सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्ने कक्षा १० मा अध्ययनरत सिद्धाले एक सातायता अश्लील शब्द… विस्तृत समाचार
‘दुवै विशेष दूतले उच्चस्तरको भेट पाउँछन्’
काठमाडौं, २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विशेष दूतका रूपमा भारत र चीन जान लागेका उपप्रधानमन्त्रीहरूले त्यहाँको उच्च नेतृत्वलाई भेट्ने भएका छन् । भारत र चीनका राजदूतहरूले विशेष दूतलाई उच्चस्तरको भेट गराइने आश्वासन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले भारत र चीनका राजदूतहरूलाई शुक्रबार मन्त्रालयमा नै बोलाएर सरकारले विशेष दूत पठाउने निर्णय लिएको र भ्रमण टोलीको तयारीबारे औपचारिक जानकारी… विस्तृत समाचार
काठमाडौं, २९ साउन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल रहेको आसपासका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि आजबाट लागु हुने गरी निषेधित क्षेत्र तोक्ने आदेश प्रजिअ रामकृष्ण सुवेदीले दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । आजको… विस्तृत समाचार
जंगलको बास अझै चलेकै छ
File Photo काठमाडौं, २८ साउन । ५५ वर्षीय दलबहादुर बोहरालाई आफ्नो पुख्र्यौली थलो कहाँ हो ? थाहै छैन । बुवा–बाजेको पालामा बझाङबाट विस्थापित परिवारको दुई पुस्तादेखि जंगलमै बास छ । ९० को दशकमा घरखेत पहिरोले पुरिएपछि बाजे कमलसिंह विस्थापित भई डडेलधुराको आलीताल पुगे । त्यसयता उनको परिवार डोटी र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँ हुँदै अहिले कृष्णपुर नगरपालिकाको वाणी नजिक वनहरा नदी किनारमा छाप्रो बनाएर बसिरहेका छन्… विस्तृत समाचार